Wararka - Sida Loo Doorto Mashiinka Goynta Istikarada
Gooyaha Dijital ah
Sida Loo Doorto Mashiinka Goynta Istikarada
Iyada oo la horumarinayo warshadaha xayeysiiska, baahiyaha daabacaadda ee gaarka loo leeyahay oo aad u badan ayaa ka soo muuqday suuqa, adeegyo kala-duwan oo kala duwan oo khadka tooska ah iyo kuwa tooska ah ayaa iyaguna soo baxay. Gaar ahaan summadaha iyo dhejiska, dufcado yaryar oo habayn shaqsiyeed ayaa la samayn doonaa haddii la tixgelinayo tirada badeecadaha la iibinayo ama la beddelayo baahiyaha xayaysiinta ee xilliga.
In kasta oo mashiinka goynta sumadda dhaqameedku leeyahay faa'iidooyin badan xagga xawaaraha, waxay u baahnayd in la sameeyo caaryada sida ku dhejisan dhejiska mar kasta, taas oo aan ahayn waqti lumis, laakiin sidoo kale kordhisa kharashyo badan. Isla mar ahaantaana, mashiinnada goynta summadaha oo baaxad leh ayaa had iyo jeer qaadan jiray meelo waaweyn, waxayna lahaayeen kharashyo wax-soo-saar oo sarreeya, kuwaas oo aan ku habboonayn soo-saarka alaabada la habeeyay.
Ameida C taxane mashiinka goynta sumadda dhijitaalka ah ayaa loo adeegsaday 3 madax goynta si otomaatig ah loo gooyo, wuxuu si otomaatig ah u heli karaa geeska iyadoo la raacayo faylka naqshadeynta, wuxuuna mindi ku gooyn karaa dhammaan noocyada garaafyada caadiga ah ama qaababka qaababka gaarka ah leh. Waxa kale oo ay lahayd shaqo toosin toos ah si loo hubiyo sax ahaanshaha goynta joogtada ah muddo dheer, waxayna samayn kartaa hawlgal si buuxda otomaatig ah daryeel la'aan.
Mashiinka goynta sumaddan wuxuu dhammaystiri karaa dheecaanka qashinka iyo shaqaynta dahaarka inta la goynayo summadaha, badbaadinta shaqada iyo qiimaha ugu badan. Isla mar ahaantaana, taxanaha Ameida C ee mashiinka goynta sumadda dhijitaalka ah wuxuu lahaa mugga yar iyo raad yar, kuwaas oo si gaar ah ugu habboonaa shirkadaha daabacaadda caadooyinka yaryar iyo soo -saarayaasha waaweyn oo si madax -bannaan u soo saara qalabka daabacaadda si ay u sameeyaan summadaha baarka ama summadaha.
Waqtiga dhejinta: Aug-31-2021
ku saabsan annaga shabakadda iibka nala soo xiriir xirfadaha